Cristiano Ronaldo oo dhammaadka xilli ciyaareedkan halkaan sabab darteed kaga tagi kara Kooxda Juventus – Gool FM
(Turin) 21 Nof 2019. Weeraryahanka Cristiano Ronaldo ayaa la shaaciyey inuu hal sabab darteed kaga tagi karo kooxda uu ka tirsan yahay haatan ee Juventus.
Cristiano Ronaldo ayaa la soo warinayaa inuu eegayo inuu u saxiixo koox kale haddii Juventus ay xilli ciyaareedkan ku guuleysan weyso tartanka Champions League.
Waxa uu koobkan kula guuleystay Manchester United iyo Real Madrid xiddiga xulka qaranka Portugal ayaana doonaya inuu tartankan Champions League kula guuleysto saddex kooxood oo kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, Suxufiga la yiraahdo Eduardo Inda ayaa soo jeediyey in 34-sano jirkaaan uu isaga tagi doono koxoda reer Talyaani haddii aysan soo gabagabaynin sugitaankooda 24-ka sanadood ee ay sugayeen inay ku guuleystaan Koobka Horyaallada Yurub.
Isagoo la hadlayey Warsidaha la yiraahdo Chiringuito De Jugones waxa uu yiri Inda: “Cristiano Ronaldo ayaa ka tagi kara Juventus dhammaadka xilli ciyaareedkan hadda socda, haddii aysan ku guuleysan Champions League.
“Wuxuu u aaday Turin inuu isku dayo inuu saddex kooxood oo kala duwan kula guuleysto Champions League, laakiin arrimuhu way sii adkaanayaan.
“Juventus waxay doonaysaa inay la saxiixato Paul Pogba iyo Kylian Mbappe, waxaana u malaynayaa inay ku adkaan doonto iyaga gaar ahaan kan labaad, haddii ay doonayaan inay la soo saxiixdaan ciyaaryahannadaan waa inay u ogolaadaan Ronaldo inuu kooxda ka tagto, marka waa natiijada ay u badan tahay.”
Ronaldo ayaa weli gacanta ku haysta heshiis labo sanadood iyo bar ah oo kaga harsan qandaraaskiisa uu kula joogo kooxda hoggaaminaysa horyaalka Serie A.